Mpanamboatra sy mpamatsy kojakoja fiaran-dalamby - Fiarovan'ny fiaran'ny fiaran-dalamby China sy ny ozinina misy ny accessories
KN95 tsipika famokarana masinina semi-mandeha ho azy
Straddle monorail bogie, misy fampandrosoana, desgin ary famokarana. Natao ho an'ny lalamby hazavana, fiara ambany rihana, fiaran-dalamby haingam-pandeha, lamasinina bala ary kamiao, 100 000 / taona, manokana ho an'ny mpanjifa. Izahay dia nanome ho an'ny China Railway Group Limited, China Sky Railway Group.
Fitaovana: latabatra fanodinana welding lehibe, foibe fametahana gantry 5-sisi; miaraka amin'ny ozinina ampy fitaovana, teknisianina matihanina ary vondron'olona mahay mahay.
Ampiharina amin'ny lalamby maivana, fiara ambany rihana, fiaran-dalamby haingam-pandeha, lamasinina bala ary kamiao, ny fahafahan'ny maotera stator-2200pcs / taona; manokana ho an'ny mpanjifa, nomenay ho an'ny lamasinina Bombardier (Sina & Europ), skoda (Czech), China.
Ampiharina amin'ny lalamby maivana, fiara ambany rihana, lamasinina haingam-pandeha, lamasinina bala ary tram, ny fahafahan'ny môtô rotor-3000pcs / taona, ny fahafahan'ny faritra hafa amin'ny motera mivezivezy- an'arivony; manokana ho an'ny mpanjifa, nomenay ho an'ny lamasinina Bombardier (Sina & Europ), skoda (Czech), China.
Ampiharina amin'ny lalamby kely, fiara ambany, lalana hafainganam-pandeha, fiaran-dalamby sy tram-bala, fahafaha -250pcs / taona. Manokana ho an'ny mpanjifa, nomenay ho an'ny China Railway Group Limited,;
Fitaovana mandroso famokarana: ivon-toeran'ny famaky efatra-antsasaky ny foibe, ivon-toeran'ny milina marindrano, latabatra fitsapana faneriterena miendrika tsindry miaraka amin'ny fitaovana fitsapana feno (fitsapana hook, fitsapana amin'ny rivotra, fitsapana havizanana, sns.)
Ampiharina amin'ny lalamby hazavana, fiara ambany rihana, fiaran-dalamby haingam-pandeha, lamasinina bala sy kamiao, 10000 / taona isan-taona, natokana ho an'ny mpanjifa, natolotray ho an'ny China Railway Group Limited, China sky Railway Group;
Fitaovana: latabatra fanodinana fantsom-bozaka lehibe, ivon-toeran'ny machining gantry miampy 5 Manana orinasa voaofana tsara, teknisianina matihanina ary vondron'olona mpiasa mahay izahay.
Trano maotera milamina rano
Ampiharina amin'ny lalamby maivana, fiara ambany rihana, fiaran-dalamby haingam-pandeha, lamasinina bala ary tram, ny motera milomano misy rano dia manome ny vokatra mangatsiaka be amin'ny alàlan'ny fizotran'ny rano. Ny fahafahan'ny trano maotera milomano misy rano dia 1500pcs / taona ary ny fahaizan'ny faritra hafa amin'ny motera mihetsika dia mihoatra ny iray hetsy isan-taona. Raha ny momba ny mpanjifa, izahay dia nanome ho an'ny Bombardier (Sina & Europ), skoda (Czech), lamasinina sinoa.